बच्चालाई टन्सिल बढ्यो ? यसो गर्नुहोस - inaruwaonline.com
बच्चालाई टन्सिल बढ्यो ? यसो गर्नुहोस
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २७, २०७४ समय: ६:२०:५९
बाथमुटुरोगबाट नेपालमा बर्षेनी १ हजार बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको अनुमान छ– बालबालिकाहरुमा टन्सिल बढ्दा त्यसबिरुद्ध प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक औषधिको विकल्प नखोज्न चिकित्सकहरुले अभिभावकहरुसंग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले बालबालिकामा देखिने टन्सिलको समयमै उपचार हुन नसके त्यसबाट बाथमुटुरोग निम्तन सक्ने र त्यसको असर मुटुको भल्वमा नै पर्न सक्ने भन्दै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालमा ५ देखी १५ बर्ष उमेर समुहका बाथमुटु रोगबाट पिडीत बालबालिकाको संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको अनुमान छ । पिडीत बालबालिका संख्या बर्षेनी साढे सात हजारको दरले थपिने गरेका छन् भने एक हजार बढीले ज्यान गुमाउने गरेको अनुमान छ । नेपालमा ५ देखी १५ बर्ष उमेर समुहका बाथमुटु रोगबाट पिडीत बालबालिकाको संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको अनुमान छ । पिडीत बालबालिका संख्या बर्षेनी साढे सात हजारको दरले थपिने गरेका छन् भने एक हजार बढीले ज्यान गुमाउने गरेको अनुमान छ ।
त्यसबाहेक बच्चालाई चिसोमा राख्नु हुदैन् । भिडभाडमा पनि राख्नु पनि राम्रो मानिदैन् । कहिलेकाही भिडभाडबाट रोग सल्कन सक्छ । त्यस्तै धूमपान तथा बाताबरणीय प्रदुषणबाट पनि जोगाउनुपर्छ । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो बालबालिकालाई कुपोषित हुनबाट रोक्नुपर्छ ।नेपाली हेल्थबाट